အတွေးများတာတကယ်တော့မကောင်းဘူး ဒါပေမယ့် မတွေးဘဲလဲမနေတတ်ဘူး – Candle Myanmar
အတွေးများတာတကယ်တော့မကောင်းဘူး ဒါပေမယ့် မတွေးဘဲလဲမနေတတ်ဘူး
အတွေးများတာတကယ်တော့မကောင်းဘူး ဒါပေမယ့် မတွေးဘဲလဲမနေတတ်ဘူး။
တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ်ပြန်သတ်တယ် ကိုယ့်အတွေးနဲ့ပဲ ရန်ဖြစ်နေရတယ်။ အပေါင်းသင်းမဲ့တယ်ဆိုတာထက် တချို့အရာတွေမှာ ကျွန်တော်ကြောက်သွားလို့ ကိုယ့်ဘက်ကစိတ်ရင်းနဲ့ပေါင်းပေမယ့် နောက်မှပေါ်လာသူကိုပိုခင်သွားတာတို့။
“Overthink ဖြစ်တာဟာ တကယ်တော့ သံယောဇဥ်ကနေစတာပါ ။ ကိုယ်ခင်တဲ့သူဆို တခြားသူကို ပိုခင်သွားမလား ? ကိုယ်ချစ်တဲ့သူ အပြောင်းလဲမြန်သွားမလား ? မယုံကြည်တာတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲ ? ကိုယ်ကသံယောဇဥ်ကြီးတော့လဲ အတွေးပေါင်းစုံနဲ့ နှိပ်စက်တာမဆန်းပါဘူး။ ကြာလာတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပဲပြုပြင်ရင်း တဖြည်းဖြည်း တစ်ယောက်တည်းဖြစ်လာတယ်။
ဟိုအရင်လို လူတိုင်းကို စိတ်ရင်းနဲ့ပေါင်းပြီး ကောင်းပြလိုက် ပြီးမှအဲ့လူကပြောင်းလဲသွားရင်ကိုယ်ပဲ နာကျင်ရတယ်။ အချစ်တွေ အကုန်ပေးပြီးလိုက်မှ ဟန်ဆောင်ချစ်ခဲ့တာပါလို့ အပြောခံရမှာကို အမုန်းဆုံးနဲ့အရွံဆုံးပဲ။ တချို့လူတွေဟာ ကိုယ့်အတွက်ပဲကိုယ်ကြည့်ကြတယ် ! သူတို့ တစ်ခဏ တာပျော်ရွှင်ဖို့ တစ်ပါးသူရဲ့ နှလုံးသားကို ဆော့ကစားတယ်။ လိုအပ်ပါတယ်လို့ လာပြောပြီး မလိုအပ်တော့ သွားတော့ ဆိုပြီး နှင်ချတယ်။
Overthink ဖြစ်တဲ့အခါ ညဘက်တွေ အတွေးနဲ့ အထီးကျန်တယ်။ Overthink ဖြစ်တဲ့အခါ ဝမ်းနည်းမှုတွေနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဒဏ်ခတ်မိတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကျွန်တော်လဲ ခပ်ကင်းကင်းဖြစ်လာတယ်။ အပေါင်းသင်းလဲနည်းလာသလို ကျွန်တော့်စိတ်လေးလဲ တည်ငြိမ်လာတယ်။ မာနကြီးတာလဲမဟုတ်သလို ချေမိုးနေတာလဲမဟုတ်ပါဘူး။ သံယောဇဥ်အလွယ်တကူဖြစ်လွယ်ပြီး အတွေးပေါင်းစုံနဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်တတ်တာကြောင့် ခပ်ကင်းကင်းနေလာရင်း နေသားကျသွားတဲ့သဘောပါ။ ။..
“Overthink ဖြစ်တာဟာ တကယ်တော့ သံယောဇဉ်ကနေစတာပါ ။ ကိုယ်ခင်တဲ့သူဆို တခြားသူကို ပိုခင်သွားမလား ? ကိုယ်ချစ်တဲ့သူ အပြောင်းလဲမြန်သွားမလား ? မယုံကြည်တာတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲ ? ကိုယ်ကသံယောဇဉ်ကြီးတော့လဲ အတွေးပေါင်းစုံနဲ့ နှိပ်စက်တာမဆန်းပါဘူး။ ကြာလာတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပဲပြုပြင်ရင်း တဖြည်းဖြည်း တစ်ယောက်တည်းဖြစ်လာတယ်။
Overthink ဖြစ်တဲ့အခါ ညဘက်တွေ အတွေးနဲ့ အထီးကျန်တယ်။ Overthink ဖြစ်တဲ့အခါ ဝမ်းနည်းမှုတွေနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဒဏ်ခတ်မိတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကျွန်တော်လဲ ခပ်ကင်းကင်းဖြစ်လာတယ်။ အပေါင်းသင်းလဲနည်းလာသလို ကျွန်တော့်စိတ်လေးလဲ တည်ငြိမ်လာတယ်။ မာနကြီးတာလဲမဟုတ်သလို ချေမိုးနေတာလဲမဟုတ်ပါဘူး။ သံယောဇဉ်အလွယ်တကူဖြစ်လွယ်ပြီး အတွေးပေါင်းစုံနဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်တတ်တာကြောင့် ခပ်ကင်းကင်းနေလာရင်း နေသားကျသွားတဲ့သဘောပါ။ ။
Previous: ဘယ်​လောက်ပဲချစ်ချစ် ပိုင်ရှင်ရှိ​နေရင် နောက်ဆုတ်ရမှာက ကျင့်ဝတ်တစ်ခုပါပဲ
Next: “ဒီတစ်ခါ တကယ်နောက်ဆုတ်လိုက်ပါပြီ”